Madaxweyne Xasan Shiikh: “Madaxweyne Farmaajo Juhdiga uu 4 sano ku bixiyay Gobolka Gedo haddii uu ku bixin lahaa Arrinta Badda, horumar ayaa maanta laga gaari lahaa” – Goobjoog News
Madaxweyne Xasan Shiikh: “Madaxweyne Farmaajo Juhdiga uu 4 sano ku bixiyay Gobolka Gedo haddii uu ku bixin lahaa Arrinta Badda, horumar ayaa maanta laga gaari lahaa”
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweeynihii hore ee dalka ayaa sheegay in tan iyo markii uu talada dalka wareejiyay aysan dowladda wax talaabbo ah u qaadiin sidii loo difaaci lahaa Baddeenna.
Xasan Sheekh Maxamuud oo wareeysi dhinacyo badan taabanay siiyay GoobJoog News ayaa sheegay in jufdiga iyo dadaalka ay dowladda ku bixisay sidii ay u kala fur furi laheyd gobalka Gedo , haddii lagu bixin lahaa in natiijada ay ka fiicnaan laheyd tan maanta .
“Anaga nasiib darrada ugu weyn ee na heeysato waxa waaye horayna waan uga hadlay qadiyadda Badda, dowladdeenna kuma mashquulsana Juhdiga iyo dhaqaalaha iyo waqtiga dowladdeennu ay gelisay Gedo , iyo Jubbaland sidii loo kala fur furi lahaa , haddeey badda gelin laheeyd ani waxaan aaminsanahay waqtigaan in jawaab lahaayn laha xukunna waa dhici lahaay aan qabaa , laakiin dowladda waqti magelin “.
“Daliil qof ka sheeynooya malahan , Hoowshu sow dad ka mas’uul ah oo ka shaqeeya sow ma rabto , Hadda ka horna wareysi dheer aan ka bixiyaya arimaha badda dowladda horayna ugama shaqeyn haddana kama shaqeeynoyso, dadkii ka shaqeeynayay dhanna waa kala dirtay “.
“Looyaradiiye kala dirtay , Safiirki ka shaqeeynayay dirtay , xeer ilaaliyihii yaqiinay ee dirtay , weligeed dowladda dadka inta hortimaddo qadiyadda badda saan waaye caqabadahaana naga heeysta ma dhihin , anaga waan geeynay Baarlamaankaan loo geeyn jiray , xukuumadda loo geeyn jiray , Bulshada Rayidkaa ka qeyb gali jirtay , oo maxkamadda inta tagto dhageeysan jirtay waxa meesha ka dhacayo, Afar sanno la soo dhaafay hal talaaboo saas ah dadaal baddaas laguma Bixin”.
Halkan Ka Daawo Waraysi Xasan Sheekh Oo Dhameystiran